के गर्भ रहेको थाहै नभई बच्चा जन्मेला त ? तर यहाँ भयो त्यस्तै !!! | Rajmarga
के गर्भ रहेको थाहै नभई बच्चा जन्मेला त ? तर यहाँ भयो त्यस्तै !!!
के तपाई विश्वास गर्नु हुन्छ कि कुनै महिला गर्भवती भएकी हुन् र उनलाई त्यसबारे अस्पताल भर्ना भएपछि मात्र थाहा होस् ? विश्वास गर्न निकै कठिन छ तर हालै यसप्रकारको एउटा घटना सार्वजनिक भएपछि सबै आश्चर्यमा परेका छन् । तर यस्तो कसरी हुन सक्छ ?
यसबारे वास्तविकता थाहा पाउन हामीले चिकित्सकसँग बुझ्यौ । पहिलोपटक आमा बन्नु त्यसै पनि निकै कठिन हुन्छ । तर, सोच्नुस् त कस्तो होला कुनै महिला गर्भवती भएकी हुन् तर उनलाई त्यसबारे कुनै जानकारी नै नहोस् । उनलाई यसबारे अस्पताल भर्ना भएपछि मात्र थाहा होस्।
गर्भ रहेको बारे कुनै जानकारी नै नभएकी महिलालाई चिकित्सकले अचानक महिला जुन पीडाले छटपटाइरहेकी छन् त्यो सामान्य पेटको दुखाई नभएर ‘लेबर पेन’ भएको बताउँछन् ।
यही हप्ताको सुरुवातमा इंग्ल्याण्डको न्युक्यासल निवासी २१ वर्षीया शरलाँट थम्पसन अचानक चर्चामा आइन् ।
बेबी पम्प थिएन…
चर्चामा आउनुको कारण उनको ‘सरप्राइज’ डेलिभरी थियो । लेबर रुममा जानुअघिसम्म कुनै पनि यस्तो संकेत देखिएको थिएन कि उनी गर्भवती छिन्।
उनको पेट पूर्ण रुपमा फ्लैट थियो जबकि गर्भवती भएको तेस्रो महिनाबाटै बेबी पम्प देखिन थाल्दछ।डेली मेलमा प्रकाशित समाचारअनुसार सन् २०१५ डिसेम्बरमा शरलाँटको अबेर राति निद्रा खुल्यो । उनको पेटमा दुखाई निकै थियो र ब्लीडिङ पनि भइरहेको थियो ।
उनले नर्थम्बर्रिया स्पेशलिस्ट एमरजेन्सी केयर अस्पतालका लागि ट्याक्सी चढिन् । जहाँ उनलाई नर्सहरुले बताए कि उनी नौं महिनाकी गर्भवती छिन्।
र, जुन पीडा उनलाई भइरहेको छ त्यो लेबर पेन हो । दुई घण्टापछि उनको काखमा माली थिइन् । अब उनी दुई वर्षकी एउटा स्वस्थ बच्ची छिन्।
डेलिभरी गराउने डाक्टर भेनेसा मैकेका अनुसार धेरै कारण छन्, जसका कारण कतिपय अवस्थामा महिलालाई थाहा नै हुँदैन कि उनी गर्भवती छिन्।
केही महिलालाई लाग्छ कि उनी भला कसरी गर्भवती हुन सक्छिन् जबकि हरेक महिना उनलाई पिरियडजस्तो कुरा भइरहेको छ। तर, कमै महिलालाई थाहा हुन्छ कि कतिपय अवस्थामा पिरियड चक्र नर्मल भएको छैन भने पनि तपाई गर्भवती हुन सक्छिन्।
डाक्टर मैकेका अनुसार ‘गर्भवती हुनुअघिको तौलले पनि यसमा एउटा मुख्य निर्वाह गर्दछ ।यदि तपाई निकै नै दुब्लो पातलो हुनुहुन्छ भने हुन सक्छ कि जन्म लिनेवाला बच्चा पनि दुब्लोपातलो र सानो छ । यसका साथै यदि कुनै निकै स्वस्थ र तौल बढी छ भने पनि त्यस्ता महिलाको गर्भावस्था पहिचान गर्न समस्या हुने गर्दछ ।
‘यसका साथै यो पेटको मांसपेशीको शक्तिमा पनि निर्भर गर्दछ । पहिलोपटक गर्भवती हुँदा बेबी पम्प देखिन बढी समय लाग्छ किनभने पेटको मांसपेशीहरु पहिलोपटक खिचिदै गरेको हुन्छ । बलियो मांसपेशीहरु कतिपय अवस्थामा गर्भ रहेको अन्तिम समयसम्म बेबी पम्प नउठ्न सक्छ।’
यदि तपाई इन्स्टाग्राम स्टार साराह स्टेजलाई स्मरण गर्नुभयो भने तपाईलाई विश्वास गर्न बढी समस्या हुने छैन ।
साराहले आफ्नो प्रेग्नेन्सीका क्रममा धेरै तस्वीर शेयर गरेकी थिइन् तर अधिकांश तस्वीरमा उनको पेट फ्लैट नै थियो ।
डाक्टरहरुका अनुसार यस्ता घटना निकै दुर्लभ हुन्छन्, जब महिला गर्भवती भएपछि उनी उनलाई गर्भवती भएको थाहा हुँदैन । एक अध्ययनका अनुसार करिब साढे सात हजार घटनामा एउटा घटना यस्तो हुने गर्दछ , जब महिलालाईगर्भवती भएको थाहा हुँदैन ।
यद्यपि कतिपय अवस्थामा यसको कारण भावुकता पनि हुन सक्दछ । कतिपय अवस्थामा यस्तो पनि हुन्छ कि केही मानिसलाई थाहा हुन्छ कि उनी गर्भवती छिन् तर उनीहरु यसलाई स्वीकार गर्नदेखि डराउँछन्।
उनीहरुलाई लाग्दछ कि यस्तो गर्दा उनीहरु पटकपटक प्रेग्नेन्सीका विषयमा हुने समस्यालाई अजरअन्दाज गर्न सक्नेछन् ।
यद्यपि कुनै पनि अवस्थामा यस्तो गर्नु ठिक होइन । अचानक लेबर रुममा भर्ना हुनु, उक्त महिलाका लागि जति आश्चर्यजनक हुन्छ, त्यति नै उनका साथी र परिवारका अन्य सदस्यका लागि पनि हुन्छ । बीबीसी हिन्दीबाट
Previous post: यस्ता छन् यौन जीवनमा रंग भर्ने पाँच तरिका ..
Next post: अमेरिका र युरोपमा रुसी कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला गर्ने होडबाजी, रुसले भन्यो– उचित समयमा उचित जवाफ दिइने छ